ए सरकार ! नागरिकको मायाँ छ कि छैन ? – Narendra KC
An Aspiring Journalist & Writer
माविसम्म दोस्रो भइँन, त्यसपछि पहिलो भइँन
ए सरकार ! नागरिकको मायाँ छ कि छैन ?
June 25, 2013 narendrakcLeaveaComment on ए सरकार ! नागरिकको मायाँ छ कि छैन ?
भारतको उत्तराखण्डमा केही दिनअघि आएको बाढी पहिरोबाट बाँचेकाहरु नेपाल आउन फर्कन थालेका छन् । पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लाबाट उत्तराखण्डको गौरीकुण्ड गएका नेपालीमध्ये कति हताहत भए र कति सकुशल छन् भन्ने नखुले पनि त्यहाँ बिपत्ति भोगेकाहरु फर्कन थालेपछि धेरै कुरा खुल्न थालेको छ । बिपत्ति भोगेर फर्केकाहरुले आफूले भागेका निकै कहालीकाल्दा पीडा सुनाउने गरेका छन् । त्यहाँबाट फर्केकाहरुको पीडा र अनुभूति समान खालको छ अनि उनीहरुले दिएको जानकारी पनि समानखालकै छ । फर्केका जति सबैले गौरीकुण्ड क्षेत्रमा १५ देखि २० हजार नेपाली रहेको र त्यसको केही हिस्सा हताहतीमा परेको बताएका छन् । गौरीकुण्डदेखि यमुनोत्री र केदारनाथसम्म जाने यात्रुहरुलाई बोक्नका लागि बर्षेनी नेपाली त्यहाँ जाने गर्दछन् । त्यहाँ डोली बोक्नेले प्रत्येक बर्ष नयाँ लाइसेन्स बनाउने प्रावधान रहेको र १५ हजारभन्दा बढीले यो बर्ष मात्रै लाइसेन्स बनाएको तथा ५/७ हजार जति त्यहाँ ब्यावसाय गरेरसमेत बसेकाले २० हजारको हाराहारीमा नेपाली रहेको त्यहाँबाट फर्केकाहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार त्यहाँ ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।
सुदूरपश्चिममा आएको विपत्तिलाई सम्हालिनसक्दै नेपालले अर्को विपत्तिको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । उत्तराखण्डमा आएको बिपत्तिको धक्का नेपालले पनि व्यहार्नुपर्ने भएको छ । बाढी पहिरोबाट नेपालभित्रै पनि देशभरि गरी ३० जना जतिको ज्यान गएको छ भने केही हराइरहेका छन् । दार्चुलालगायतका जिल्लामा बगेको धनसम्पत्ति पनि ठूला क्षति हो तर धनसम्पत्ति जोड्न सकिएला, मानवीय क्षतिको पूर्ति हुन सक्दैन । ३० जना जतिको ज्यान जानु पनि सानो क्षति होइन, त्यसमा थप भारतमा हराइरहेका सयौं नेपाली जीवित फेला परेनन् भने त्यो हाम्रो मुलुक र हामी नेपालीका लागि ठूलो दुर्भाग्य सावित हुने छ । अहिलेसम्म धेरैको शव भेटिएको र कतिपयको परिवारजनले धार्मिक कार्यसमेत शुरु गरिसकेकाले मृतकको संख्या निकै बढ्ने देखिएको छ । तर, घोर बिडम्बना त के भएको छ भने आफ्ना २० हजार नागरिक प्रभावित हुँदा र सयौं हराइरहेको खबर आउँदा पनि नेपाल सरकार एक शब्द बोलेको छैन ।
भारतस्थित नेपाली दूतावासले विवरण संकलन गरिरहेको र भारत सरकारसँग समन्वय गरेर उद्दारमा सहयोग गरेको जनाए पनि त्यहाँ कति नेपाली थिए, त्यसमध्ये कति सकुशल छन् भन्ने सूचनासमेत नराख्नु आफ्ना नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन हो । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो भारतमा हराएका नेपालीको खोजी गर्नुपर्छ । जीवितको खोजी गरी घरसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था र मृतकको शव ल्याउने अनि उनीहरुका लागि परिवारलाई आवश्यक राहतको प्रबन्ध गर्न सरकारले अब ढिला गर्नु हुँदैन । सरकारले चाहेमा त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको बारेमा जानकारी लिन त्यति समस्या पनि छैन । उनीहरुले आफ्नो विवरण दर्ता गराएर मात्र गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम शुरु गरेकाले त्यहाँका कार्यालयहरुमा कागजात नबगेको भए त्यसबाट पनि आधार लिन सकिन्छ ।
अहिले बाँचेका नेपाली प्रत्येक नाकाहुँदै नेपाल छिरेका छन् । नेपाल छिर्ने सबैको विवरण राख्ने र उनीहरुबाट थप उनका साथीहरुको समेत विवरण लिएर खोजी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै ज्यान गुमाएका वा हराएका धेरैको जानकारी घर परिवारले पाइसकेका छन् । सबै जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमार्फत स्थानीयस्तरबाटै सूचना संकलन गरेर मृतक वा बेपत्ताको सूची तयार पार्न र सोहीअनुरुप खोजी तीब्र पार्न जरुरी छ । सक्छ भने सरकारले नेपालबाटै एउटा टोली भारत पठाउन जरुरी छ, सक्दैन भने पनि त्यहाँस्थित दूतावासलाई परिचालन गरेर नेपालीहरुको खोजी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । मृतकहरुको अन्तिम सूची तयार भएपछि उनका परिवारलाई नेपाल र भारत दुबैतिरबाट आवश्यक राहतको प्रबन्ध गर्न पनि सरकारले अहिल्यैदेखि तयारी थाल्न जरुरी छ ।
सम्मान र समानताको खोजीमा वादी समुदाय
नरेन्द्र भन्छन्– ‘डण्डिफोरे कडी दाह्री फुल्दासम्म जोडिन्छ कि ?’
बुद्धम शरणम् गच्छामि…
दुई बर्षअघि हराएका सल्यानीको सम्झनामा
एक गाउँ, एक पुस्तकालय
उत्तराखण्ड प्रकरणमा सरकारको नालायकीपन
खाद्यान्न संकट अन्त्य गर्न अहिले नै सोचौं
सही बाटोमै छन् त पुष्पलाल र बिपीका अनुयायीहरु ?
Louann on राजनीतिमा अब जीवन बदल्ने एजेण्डा चाहिन्छ
Karolin on राजनीतिमा अब जीवन बदल्ने एजेण्डा चाहिन्छ
hari khadka on टनेलमाथि उभिएर…
hari khadka on बादलमाथिको गुराँसे यात्रा
Lori on राजनीतिमा अब जीवन बदल्ने एजेण्डा चाहिन्छ
Naya Yougbodh National Dayily